Global Voices teny Malagasy » Barbady: Kanadiana Iray Mpizahatany Maty Taorian’ny Herisetra Nahazo Azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Barbady: Kanadiana Iray Mpizahatany Maty Taorian'ny Herisetra Nahazo Azy
Voadika ny 10 Mey 2018 13:53 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika (fr) i Fabienne Flessel, miora
Sokajy: Karaiba, Barbady, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tsidika
Tamin'ny voalohan'ny volana, vaovao somary nampiahiahy no ren'ireo Barbadiàna [amin'ny fiteny anglisy] mikasika ny fanafihana feno habibiana najo ireo Kanadiàna roa mpizahatany , nandritra ny fitsangatsanganana nataon'izy ireo nanaraka ny iray tamin'ireo morontsiraky ny nosy. Haingana no nandraisan'ireo blaogera ny tantara – nangataka famelàna tamin'ny fianakavian'ireo trà-doza ny Barbados Free Press , tamin'ny anaran'ilay firenena tohina. Nitarika ny gazety mahazatra tany Ottawa  [amin'ny fiteny anglisy] ny lahatsorany, hamaritra lay blaogy “ho loharano tokana ho fanohanana an'i Terry Schwarzfeld”. Tany amin'ny efitrano famelomana aina no nisy azy taorian'ireo daroka totoafo nanjo azy (niverina nahatsiaro tena ny vinantovaviny fotoana kely taorian'ny fanafihana). Ity heloka bevava ity izay nofaritana ho herisetra teo aloha dia lasa ho famonoana olona nanomboka teo, raha toa tsy avotra tamin'ireo ratrany i Terry Schwarzfeld  [amin'ny fiteny anglisy] tao amin'ny hopitalin'i Ottawa. Manohy mampiseho ny hatezerany hatrany ireo blaogera na dia noho ny fiheverana fotsiny aza hoe tao amin'ny fireneny no nitranga ny heloka tahaka izany.
Mazava fa ny iray tamin'ireo ahiahy  dia ny fiantraikan'io trangam-piainana io amin'ny laza erantanin'i Barbady  [amin'ny fiteny anglisy], amin'ny maha-fiantsonana ara-pizahantany azy: miankina tanteraka amin'ny fizahantany ny toekarena barbadiana ary ny krizy ara-toekarena ankehitriny izay miantraika amin'izao tontolo izao  [amin'ny fiteny anglisy] dia nahatonga ny toeran'ny nosy ho somary sarotsarotra. Tsirim-panantenana iray no nentin'ny fahatongavan'ireo solontenan'ny Raharaham-bahiny kanadiana, izay nanambara  [tamin'ny fiteny anglisy] fa tsy hanova ireo toroheviny amin'ireo mpivezivezy ry zareo, taorian'ilay fanafihana teo amin'ny nosy. Na izany aza anefa, tsy manamora ny fanekena ny fahafatesan-dRtoa Schwarzfeld  [amin'ny fiteny anglisy] izany.
Ho fihetsehana mikasika an'io vaovao tena mampalahelo io, nandefa ny sarin-dRtoa Schwarzfeld, feno tsiky, tao amin'ny tambajotra ny Barbados Free Press , narahin'izao fehezanteny manaraka izao [amin'ny fiteny anglisy]:
Miombom-bavaka feno amin'ny fianakaviana Terry sy ireo namany izahay.
Maneho ny fiarahamiory amin'ny fianakaviana sy amin'ireo naman'ny niharam-boina i Bajan Dream Diary  sy Living in Barbados , raha toa ny Cheese-on-bread!  manampy [amin'ny fiteny anglisy] hoe:
Tafahoatra noho ny alahelo izao. Manomana valisoa ho an'ny angom-baovao mitondra hatramin'ny fisamborana ny nanao ilay heloka bevava ny mpitandro ny filaminana ary izahay tsy afa-manoatra afa-tsy ny manantena fa tsy ho ela dia hisy olona ho avy.
Napetraka ireo valisoa ara-bola mikasika izay angom-baovao rehetra, miangavy an'ireo mpamaky i Bajan Dream Diary  [amin'ny fiteny anglisy] mba hihetsika raha toa izy ireo mahafantatra mikasika ireo mpamono olona, amin'ny alalan'ity rohy manaraka ity: Crime Stoppers  [amin'ny fiteny anglisy]. Nampita ny tatitry  ny Préfet de Police-n'i Barbady ihany koa ilay blaogera, izay nampanantena valisoa 10 000 dolara ho an'izay manome vaovao mikasika ny mpamono an'i Terry Schwarzfeld. Ankoatra izay, nilaza drafitra izy mba hampitsaharana ny heloka atao amin'ireo mpizahatany. Ampy ve ireny filazana ireny? Manadihady ilay trangan-javatra i Bajan Dream Diary  ary mahita lesona ao amin'io mba ho tànana amin'ny ho avy [amin'ny fiteny anglisy]:
Loza foana ny heloka bevava ary ireo tranga mikasika an'i Kathy Fischer sy Terry Schwarzfeld dia tena mandrotika fo ho an'ireo Barbadiana rehetra ; Na eo aza izany, raha sanatia misy ny tsy fahaizana mitantana an'io trangan-javatra io, ny krizin'ny tsy fahatokisan'ireo mpizahatany no ho tena loza kokoa. Na mahàlana aza ny famonoana mahazo ireo mpizahatany, tsy misy fialantsiny mihitsy hitodihana amin'ireo fanao mahazatra ny diplomasia… ary io, amin'ny fotoana izay ny olona rehetra manana solosaina dia afaka mametraka fifandraisana miaraka amin'ireo media ho an'ny Barbade, raha toa izy tenany ka tsy afaka ny hiandraikitra izany. Tonga ny fotoana ho an'ny Governemanta barbadiana mba hamaliana ireo tahotra voalaza any anatin'ireo media vahiny amin'ny alalan'ny fanondroana mazava ireo toerana “tsy azo aleha” ao Barbade, ary io, na dia ho tonga hatramin'ny hanekena aza fa tsy tonga lafatra ity paradisa ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/10/119209/
 aovao somary nampiahiahy no ren'ireo Barbadiàna [amin'ny fiteny anglisy] mikasika ny fanafihana feno habibiana najo ireo Kanadiàna roa mpizahatany: http://bimchat.wordpress.com/2009/03/05/canadians-attacked-in-barbados/
 Barbados Free Press: http://barbadosfreepress.wordpress.com/2009/03/05/canadian-women-attacked-on-barbados-beach-shocked-barbadians-offer-regrets-sympathy-and-best-wishes-to-victims-families-and-friends/
 Nitarika ny gazety mahazatra tany Ottawa : http://barbadosfreepress.wordpress.com/2009/03/09/ottawa-citizen-newspaper-national-canadian-coverage-bajan-media-ignores-attack-on-women-feisty-barbados-free-press-only-outlet-to-speak-out-for-schwarzfeld/
 toa tsy avotra tamin'ireo ratrany i Terry Schwarzfeld: http://www.cbc.ca/world/story/2009/03/18/ot-090318-barbados.html
 ny iray tamin'ireo ahiahy: http://bajan.wordpress.com/2009/03/14/fighting-back-against-the-crime-threat/
 ny krizy ara-toekarena ankehitriny izay miantraika amin'izao tontolo izao: https://globalvoicesonline.org/2009/03/18/global-bubbles-bailouts-and-stimulus-plans/
 ny fahafatesan-dRtoa Schwarzfeld: http://bimchat.wordpress.com/2009/03/19/canadian-woman-dies-after-babados-attack/
 Barbados Free Press: http://barbadosfreepress.wordpress.com/2009/03/19/barbados-tourist-attack-now-murder-canadian-victim-terry-schwarzfeld-dies-in-ottawa/
 Bajan Dream Diary: http://blog.bajandream.org/2009/03/18/rip-terry-schwarzfeld/
 Living in Barbados: http://livinginbarbados.blogspot.com/2009/03/crime-stopping-redux-canadian-visitor.html
 Bajan Dream Diary: http://blog.bajandream.org/2009/03/11/learning-from-the-terry-schwarzfeld-case/
 Crime Stoppers: http://www.crimestoppersbarbados.com/crimeoftheweek.aspx
 Nampita ny tatitry: http://blog.bajandream.org/2009/03/13/10000-bounty-on-the-head-of-terry-schwarzfelds-attacker/